Ukuphononongwa kunye nohlalutyo lwe-Amazon Fire TV Stick | Iindaba zeGajethi
Ukuphononongwa kunye nohlalutyo lwe-Amazon Fire TV Stick
UPablo Ortega | | Amazon, ngokubanzi, Umfanekiso kunye nesandi, Reviews, Ukusasaza
Ukubona impumelelo enkulu yentengiso eyenziwe yinduku kaGoogle Chromecast, iAmazon ayifuni kuphoswa lithuba lokuphuhlisa enye indlela eza linyathele: Intonga yeTV yoMlilo. Inkampani sele inamava kweli candelo, njengoko iseti yeTV yoMlilo yeAmazon ifumene uphononongo oluqinisekileyo kwaye igqitha kwiApple TV kwii-specs. Inkqubo ye- I-TV Stick Stick Lula ukwenziwa kwethelevishini: sisixhobo sokuqhagamshela i-HDMI esiya kuguqula iithelevishini zethu zibe zizixhobo ezifanelekileyo.
2 Iinkcukacha zoBugcisa
5 Iiapps kunye neMidlalo
6 Ixabiso kunye nokufumaneka
Ukuba ujonge i intonga enamandla kwintengiso, iFire TV Stick yenye yeenketho esizicebisayo, njengoko izakubangaphezulu kwabo bakhuphisana nabo kweli sebe. Intonga yeAmazon ine-processor-core processor, ngelixa iGoogle Chromecast kunye neRoku Streaming Stick (engaziwayo kwimarike yamanye amazwe) idibanisa iprosesa elula ene-512 MB yememori ye-RAM (i-Fire TV Stick ifikelela kwi-1GB yememori RAM).
Kwisikhundla sokugcina ikwakhona, ngokunikezela I-8GB kwindawo yayo yangaphakathi enobuninzi. IGoogle Chromecast ihlala kwi2GB kunye neRoku Stick kwi256MB nje. Ke ngoko, sinesandla sasimahla sokufaka imidlalo kwintonga esinikwa yiAmazon. Ikhathalogu yeqonga lokuthengisa linamagama angaphezu kwama-200 ukonwabisa onke amalungu osapho.
Yenye yemiba ethathelwe ingqalelo kule Nduku yeTV yoMlilo yeAmazon. Isixhobo, esinobukhulu obuncinci, silinganisiwe kwaye sinobunzima, kodwa kufanelekile ukuba sikwazi ukusifaka ngasemva okanye kwicala lala mabonakude enza ukuba kube nzima ngentambo eninzi edityanisiweyo. Ukunika amandla i-Fire TV Stick sinokukhetha qhagamshela kwizibuko le-USB kamabonwakude, kodwa siya kufumana ukusebenza ngokukuko ukuba siyayiqhagamshela kwisokethi. Kwimeko yethu i-USB yayibonakala ingenamandla ngokwaneleyo okufaka intonga.
Kwipakethi kude kufakiwe, ayinjalo ngeGoogle Chromecast kunye neRoki Streaming Stick. Le ndawo ilula ayisindi, inokuhamba ngokulula kwaye kulula ukuyilungisa ngentonga (yenziwa ngokuzenzekelayo). Ngaphandle kwamathandabuzo, umlawuli ubonelela ngamava awodwa kubasebenzisi. Singayigcwalisa kunye nesicelo seAmazon ukwenza ukukhangela kwelizwi ngokukhawuleza kwi-smartphone kwintonga ye-tv.
I-interface ilula, ilula kakhulu kwaye inezinto ezimbalwa. Eyona nto iphambili ngokubaluleka inikwe Ukudlala kwakhona kwe-Amazon Prime content, ke ukuba ubhalisile ngonyaka kule nkonzo, i-Fire TV Stick ayinakuphoswa kukuqokelelwa kwezixhobo zakho.
IAmazon iyayinyamekela layisha lonke ulwazi lweakhawunti yakho Kwintonga yeTV yoMlilo ukuze xa uyifumana, kufuneka uqinisekise ngeakhawunti yakho kwaye uyixhume kwinethiwekhi yasekhaya yeWi-Fi. Nangona i-Fire TV Stick ine-eriyali ye-Wifi, siye sanengxaki yokucinezela onke amandla esantya kumqondiso weWifi, ofikelela kuma-50 mbps. Ukuhlaziywa komdlalo kunye nesoftware kwakucotha.
Ngaphandle koku, i-Fire TV Stick yenziwe nkulu ukuze umsebenzisi asonwabele isixhobo kwakamsinya nje ukuba asifumane kwaye thintela imisebenzi yokufaka edinisayo. Kwenzeka into efanayo xa udlala umxholo, enkosi ngokudityaniswa kwetekhnoloji ye "ASAP". IAmazon iya kuba nakho ukubona imikhwa yethu yokubukela ukuze singalindi imizuzwana elishumi ukuqala ukudlala uthotho okanye imovie.
Elinye inqaku elilungileyo loku I-Amazon Fire TV Stick ukufikelela kwi ikhathalogu ebanzi yezicelo kunye nemidlalo. Iinkonzo eziqhelekileyo zeNetflix, iHulu Plus, iYouTube, iVimeo kunye namajelo kamabonwakude anje ngeXesha lokuBonisa, iBloomberg kunye nePBS, adityaniswa nezinye izixhobo ezinje ngeSpotify kunye nePandora, ukumamela umculo osasaza kumabonwakude.
Kweli candelo, eyona nto ibalulekileyo yeyayo ikhathalogu yomdlaloOku kubandakanya ezinye izihloko ezaziwayo ezinje nge "Monsters University," "Ibali lokudlala," "iTetris," kwaye ke, "I-Flappy Birds." Eyona nto ilunge kakhulu, singadlala uninzi lwezi zihloko kunye nomlawuli obandakanyiweyo kwipakethi, nangona sikwanokukhetha ukuthenga isilawuli somdlalo esinikwa yiAmazon.
Ngamafutshane, i I-Amazon Fire TV Stick yenye yezona ndlela zinamandla kwintengiso kwaye zitshiphu. Kunjalo ukwamkelwa kwayo, ukuba ngoku kunzima ukuyifumana. Iya kufumaneka kwakhona kwivenkile yeAmazon eMelika kuyo yonke inyanga kaFebruwari, nje IRandi ye39.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Ukuphononongwa kunye nohlalutyo lwe-Amazon Fire TV Stick
UCarlos Ortiz sitsho
Ndiyabuza, ngaba intonga yoMlilo iAmazon indivumela ukuba ndifikelele kwiTV ebukhoma? I-Roku Streaming Stick indivumela ukuba ndifikelele kwiTV ebukhoma ndisebenzisa iNanoflix.
Phendula uCarlos Ortiz
Uyithenge phi? Kuba iAmazon eUnited States ayikuvumeli ukuthunyelwa eSpain.
Molo molo, ndathenga intonga yomlilo e-amazon e-US apho i-voltage iyi-110 W, eArgentina sine-220 W, umba kukuba uluhlu lwevolthi ezinokudityaniswa kuyo izixhobo aluchazwanga ebhokisini kwaye ' ndiyoyika ukuyitshisa ukuba andinaso isiguquli, kwaye ayitsho inani leewatthi elizisebenzisayo, kuba kukho iinguqu ezingama-50 W 100 W kunye nezili-150 W. Ukubulisa kunye nombulelo. USergio
Izinketho ezi-8 zokufumana kwakhona ithebhu yesikhangeli esivaliweyo ngengozi
Indlela yokujonga isandi ngokulula kumanyathelo ambalwa?